Japan: Duufanadii Ugu Xumaa Mudo 60 Sano Ah Oo Ku Dhuftay Dalkaas.(Sawiro) – Heemaal News Network
Japan: Duufanadii Ugu Xumaa Mudo 60 Sano Ah Oo Ku Dhuftay Dalkaas.(Sawiro)
Roobab mahiigaan ah iyo dabaylo sida toorneedada u wareegaya ayaa ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah dalka Japan, waxana ay tani noqonaysaa duufaantii ugu xumaa ee muddo 60 sano ah ku dhufata dalkaasi.
Doofaantan oo loogu magic daray Hagibis ayaa ku dhufatay jasiiradda ugu weyn Japan ee Izu Peninsula wax yar kadib waabarigii markii ay saacada dalkaasi ahayd 7dii subaxnimo, waxana ay hada ku sii jeedaan duufaanadaasi dhinaca xeebta bari, iyadoo dabaylahaas duufaanta ka dhashay ay jarayaan xawaare dhan (140mph).
Hal nin ayaa ilaa hada la xaqiijiyay dhimashadiisa kaas oo ku dhintay degaanka Chiba ee bariga Tokyo, markii gaarigiisa uu rogmaday, ugu yaraan 60 qof oo kale ayaana lagu soo waramayaa inay dhaawacmeen.
In ka badan toddobo milyan oo qof ayaa lagu booriyay inay ka baxaan guryahooda daadad xoogan oo roobabkaas ka dhashay awgood, waxase la sheegayaa in 500000 oo qof oo kaliya loo ogolaaday inay guryahooga u hoydaan. Waxana laga baqo qabaa in dhulku uu go’o meelaha qaar.
Adeegii tareenada ayaa la hakiyay, in ka badan kumanaan duulimaad ayaa iyaguna la baajiyay, kumanaan guri ayaana ilaa hada bilaa koronto ah, adeegii internetkuna uu ka maqan yahay degaanada ku hareeraysan caasimada Tokyo.
Dhinaca kale ciyaarha koobka aduunka ee Rugby-da oo ka socday dalkaas ayaa qaarkood labaajiyay.
Jarmalka Oo ku Dhawaaqay Inuu Joojiyay Hubkii Uu ka Iibin Jiray Turkiga.
Akhriso:-Nuxurka Qudbadaha Laga Jeediyay Caleema-saarka Ahmed Madoobe.(Sawiro)